मास्टर बफोर्गले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki मास्टर विद्यार्थी ऋण
मास्टर विद्यार्थी ऋण
AFBG मा कानून (पदोन्नति प्रशिक्षण को प्रचार), लोकप्रिय मास्टर विद्यार्थी ऋण भनिन्छ, नियमित रूपमा सुधारिएको छ। आखिरी 1 मा मेस्टबर्कोग को पदोन्नति सेट हो। अगस्ट 2016 बढेको छ र ती व्यक्तिहरुको लागि जुन प्रविधि वा व्यापार अर्थशास्त्री बन्न चाहानुहुन्छ यसको लागि आवेदन गर्न सक्दछ। विशेष गरी परिवारहरूलाई सहयोग गर्नु पर्छ तर विद्यार्थीहरू पनि। क्यारियर बाइबिलले तपाईंलाई कसरी बताउँछ मास्टर बफोग।
AFBG को लागि आवश्यकताहरु
यो पदोन्नति वर्ष 1996 बाट उपलब्ध छ। सरकारको अनुसार, 170.000 मानिसहरूले यसलाई हरेक वर्ष प्रयोग गर्छन्। पदोन्नति को लक्ष्य छ: प्रशिक्षण (विशेष गरी विश्वविद्यालय परे) को लागि थप प्रोत्साहन सिर्जना गर्न र यसलाई प्रशिक्षण स्थानहरू लागि कर्मचारी रूपमा नै प्रदान गर्न व्यापार सुरु-अप प्रोत्साहन डिजाइन गरिएको छ।
प्रशिक्षण अपग्रेड सहायता ऐन (AFBG) कालिगढहरु प्रोत्साहन र जो व्यापार वा औद्योगिक foremen, टेक्नीसियन, व्यापार प्रशासन वा राज्य प्रमाणित शिक्षकहरूलाई र अन्य पेशेवरहरुको लागि एक प्रशिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ।
केहि धन कोष KfW द्वारा एक सब्सिडी को रूप मा प्रदान गरिएको छ, र आंशिक रूपमा कम ब्याज दर को रूप मा। यसको लागि कुनै उमेर सीमा छैन। मास्टर बफोग र बफोगले पनि पूर्ण कार्य प्रशिक्षण बिना मान्छे पाउन सक्छ।
यहाँ आवश्यक छ बहु-वर्षको व्यावसायिक अनुभव हो र इच्छित डिग्री अवस्थित व्यावसायिक अनुभवमा आधारित छ।
यहां सम्म कि विदेशियों केहि मामिस्टर-बाफोग संग केहि परिस्थितियों को तहत पदोन्नति गर्न सकिन्छ:
जर्मनीमा स्थायी निवास।
- अवस्थित निवास अनुमति / स्थायी निवास अनुमति।
- तपाईं जर्मनीमा 15 महिनाका लागि बाँचिरहनुभएको छ र लाभप्राप्त रोजगारी गरिएको छ।
मास्टर बफोग को अधिकार छ?
कोष प्रत्येक दावी व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा वा अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता गरेको छ छ गर्न सक्नुहुन्छ। पनि स्नातक - विद्यार्थी र ड्रप-बहिष्कार मास्टर विद्यार्थी ऋण लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर, लक्ष्य डिग्री व्यापार बोर्ड को स्तर माथि हुनुपर्छ, एजेन्ट जाँच गर्नुहोस् वा एक प्राविधिक कलेज स्नातक। यी निम्न पेशाहरू हुन्:
- सफ्टवेयर विकासकर्ता
- मास्टर दन्त प्रविधि
- मास्टर बेकर
- पर्यावरण परामर्शदाता
- मार्केटिंग विशेषज्ञ
- विशेषज्ञ नर्स
- औद्योगिक विशेषज्ञ
- व्यापार सूचना
- कार्यालय विशेषज्ञ
निरन्तर शिक्षा पूर्ण-समय, अंश-समय, दूरी सिक्न, वा स्कूल र अपरस्त्रार्थ द्वारा गर्न सकिन्छ। तथापि, यस प्रशिक्षणको लागि निश्चित सुनिश्चित गर्नका लागि केही शर्तहरू छन्:
- न्यूनतम अवधि - 400 पाठ
- पूर्ण समय - कम्तीमा 25 कार्य दिवसहरूमा4सबकहरू3वर्ष भन्दा बढी छैन।
- अंशकालिक - मासिक न्यूनतम 18 पाठहरू अब4वर्ष भन्दा बढी छ।
- दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमहरू अंश-समय मापको रूपमा पदोन्नति गरिन्छ।
- यदि सञ्चार सञ्चार पाठ्यक्रमहरू 400 घण्टा भन्दा बढि अधिक हुन्छ भने मिडिया आधारित पाठ्यक्रमहरू समर्थित हुनेछन्। यसले नियमित सफलता जाँचहरू आवश्यक छ।
Meister-Bafög - उपलब्धिहरु
आवेदकले निम्न सेवाहरू मास्टर बफोगबाट प्राप्त गर्छन्:
एक।) मर्मत पोस्ट
- एकल व्यक्तिहरूको लागि सब्सिडी दर - 768 यूरो प्रति महिना। यी मध्ये, 333 यूरो हो, बाकी KfW ऋण हो।
- एकल अभिभावकले 1.003 यूरोको कुल सब्सिडी दर प्राप्त गर्दछ,
- 1 बच्चासँग विवाहित 1.360 यूरो प्राप्त गर्दछ
-2बालबालिकालाई विवाहित गरिएकोले अहिले 1.473 यूरो प्राप्त गर्दछ।
- बच्चाहरु संग बच्चाहरु लाई 55 प्रतिशत अधिक प्रति बच्चा र अन्य को लागि 50 प्रतिशत (प्रतिभागी, पति) प्राप्त गर्दछ। A -2बाट विवाहित बच्चाहरूले 711 यूरोबाट एक अनुदान पाउनेछन्। एक्लो आमाबाबु पनि 130 यूरो मासिक देखि, बिना कि कुनै पनि बच्चाहरु को हेरविचार भत्ता प्राप्त गर्छन।
अधिकतम। पाठ्यक्रम र परीक्षा लागतको लागि अनुदान 15.000 यूरो हो। "Masterpiece" को लागि अनुदान 2.000 यूरो हो।
3।) सफलता बोनस
40 प्रतिशत परीक्षा सफलतापूर्वक पास गर्नका लागि त्यहाँ एक सफलता बोनस छ। यो अर्थ: पाठ्यक्रमको लागि 40 प्रतिशत र परीक्षा शुल्कहरूको लागि पर्खाइनेछ।
यदि एक मास्टर क्लास गर्न चाहन्छन् भने स्नातक स्नातकोत्तरले समर्थन प्राप्त गर्दछ वा एक तुलनीय थप शिक्षा लिन चाहान्छ। यहां सम्म कि dropouts को प्रोत्साहित गरिन्छ।
5।) छूटें ओस्ट्रेलिया International
राजधानी भत्ता प्रति सहभागी 45.000 यूरो को आसपास हो। दुलही र बच्चाहरु लाई 2.100 यूरो पूंजी लाभ को भत्ता दिइएको छ। आय भत्ता - लाभार्थिहरु लाई 290 यूरो को एक महिना देखि बंद।
तपाईं मुख्य संघीय राज्य जिम्मेवार आधिकारिक निकायमा जिम्मेवार मा मास्टर बफोग को लागी आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न समय मा गर्नुहोस्।
अघिल्लो लेखlombard ऋण
अर्को लेखमेजानाइन वित्त